तराईका नाका मरिच तस्करीको अखडा, चार महिनामा ३१ टन बरामद
- डिल्ली पाण्डे
१८ मंसिर २०७५, मंगलवार १८:०६
प्रहरीका अनुसार पछिल्लो समय कालो मरिचको अवैध तस्करी अस्वाभाविक रुपमा बढेको छ । प्रहरीले गत आर्थिक वर्षको जेठमा १२ टन मरिच बरामद गरेको थियो । साउनयता मात्रै तस्करी भएर नेपाल भित्रिएको १८ टन मरिच पर्सा प्रहरीले बरामद गरेको छ ।
काठमाडौं : पछिल्लो समय तराईका नाका मरिच तस्करीको प्रमुख केन्द्र बन्दै आएका छन् । खुला सीमानाको फाइदा उठाउँदै तस्करहरुले तेस्रो मुलुकबाट खरिद गरी अवैध रुपमा भारत पैठारी गरिरहेका छन् ।
साउनयता नै पूर्वी नाकाबाट १० क्विन्टलभन्दा बढी मरिच बरामद भएको प्रहरीले जनाएको छ । चालू आर्थिक वर्षको चार महिनामा मात्रै विभिन्न नाकाबाट ३१ टन मरिच अवैध किसिमले भित्रिएको प्रहरी तथ्याङ्कले देखाउँछ ।
भारतमा मरिचको भन्सार एकदमै महँगो छ । तर, नेपालमा भारतको तुलनामा भन्सार दर कम भएकाले पनि तेस्रो मुलुकबाट नेपाल ल्याएर भारत पैठारी हुने गरेको अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुङ्गानाले जानकारी दिए ।
‘पाँच प्रतिशत रहेको भन्सारलाई १० प्रतिशत पु¥याएका छौं,’ सचिव ढुङ्गानाले भने, ‘तैपनि तस्करीको आँखा मरिचमै छ ।’ तेस्रो मुलुकबाट आयात गरिने मरिच कानुनतः नेपालमै खपत हुनुपर्छ । तर, तथ्याङ्क हेर्ने हो भने यहाँ खपत हुनेभन्दा धेरै बढी आयात भएको छ ।
यसरी आयात भएको मरिच खुला सीमाको फाइदा उठाउँदै आयातकर्ताले अवैध रुपमा भारत पठाउने गरेका छन् ।
हाल भियतनामबाट मरिच आयात हुन्छ । यसअघि इन्डोनेसिया र थाइल्यान्डबाट सुपारी आयात गरी अवैध रुपमा भारत निकासी गरिँदै आएको थियो । सुपारीमा कडाइ भएपछि केही समय आयातकर्ताले सुकमेलको आयात गरी भारत निकासी गरे ।
खुला सीमाको फाइदा उठाउँदै आयातकर्ताले भारततर्फ अवैध रुपमा मरिच पठाउने गरेका छन् । झापा, मोरङ, सुनसरी, सिराहालगायतका सीमावर्ती क्षेत्रहरूबाट चोरी निकासी हुने गर्छ । भियतनामबाट आयातित मरिचको खुद्रा मूल्य नेपालमा प्रतिकिलोग्राम ७ देखि ८ सय रुपैयाँ पर्छ भने भारतमा यसको मूल्य ९ सयभन्दा माथि छ । मूल्य अन्तरकै कारण मरिचको पैठारी बढेपछि आयात यति धेरै भएको हो ।
पर्सा प्रहरीको नियन्त्रणमा ७ क्वीन्टल मरिच
जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साबाट खटिएको प्रहरी टोलीले महानगरपालिका ८ स्थित राजेश महतो नुनियाले सञ्चालन गरेको फलफूल पसलबाट सोमबार भन्सार छलीको मरिच बरामद गरेको पर्सा प्रहरी प्रमुख एसपी रेवती सापकोटाले जानकारी दिए ।
फलफूल पसलमा मरिच राखिएको गोप्य सूचनाका आधारमा प्रहरीले सोमबार उक्त पसलमा छापा मारेको थियो । फलफूल पसलमा राखिएको ७ सय किलो मरिचको खरिद तथा बिक्री गर्ने कागजपत्र नभएकाले प्रहरीले उक्त मरिच बरामद गरेको जनाएको छ । प्रहरीले अवैध मरिचको कारोबार गर्ने महतोलाई पनि पक्राउ गरेको छ ।
पक्राउ परेका महतोलाई भन्सार छलीको मरिचसहित आवश्यक कारवाहीका लागि राजस्व अनुसन्धान विभाग, मध्यक्षेत्रीय कार्यालय पथलैया बारा पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ ।
डिल्ली पाण्डे क्यापिटल नेपालका संवाददाता हुन
डिल्ली पाण्डे बाट थप
ठमेललाई पनि सर्वाेच्चको सहारा
स्टे अर्डरको तजबिजमा चलेका एयरपोर्टका पसल
क्यासिनोलाई फापेको सर्वाेच्च
बसपार्क बाहेकका सबै काउन्टर बन्द गरिने,अधिकासं टहरा हटाइदै
युनाइटेड फाइनान्सका सीईओ मिश्र उच्च अदालत पाटन र जिल्ला अदालत काठमाडौंको फरार सूचीमा
क्यान्सरदेखि नपुङ्सक हुनेसम्मका घातक विषादीको प्रयोग बढ्यो
आर्थिक पारदर्शिता, वित्तीय उत्तरदायित्व र वित्तीय अनुशासन चुनौतीपूर्ण
के हो डार्क वेब ? यसबाट साँच्चै खतरा छ त ?
नेपालमा पार्टनरसिपमा जमेका व्यवसाय
गरिबलाई परिचय पत्र
उत्पादनमूलक उद्योगमा आरएमसी ग्रुप निरन्तर अघि, पाल्पा सिमेन्टको उत्पादन फागुन दोस्रो हप्ताबाट
आङछिरिङ शेर्पा: जो भरियादेखि शक्तिशाली पर्यटन व्यवसायी भएर अस्ताए
साइन रेसुङा र पुर्णिमा विकास बैंक मर्जरमा जाने, राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंक बन्दै
घाँसको बीउ उत्पादन